Nifamahofaho ny momba ireo naratra: raikitra ny tora-bato sy ny barazy tao Toamasina | NewsMada
Nisavorovoro ny tao Toamasina, omaly. Nametraka sakana sy nitora-bato mpitandro filaminana ireo andiana olona tao Ambalabe. Niditra an-tsehatra ny polisin’ny Fip. Nisy roa ireo naratra. Na izany aza, nifamahofaho ny momba ity fifanjevoana ity.
Nidina tao Ambalambe ny mpitandro filaminana nanao fampanarahana ny fanajana ny fihibohana hijanona ‘ny olona ao an-tokantranony, omaly tolakandro. Nilefa mandositra niditra ny trano raha vao nahita azy ireo ny olona. Nambaran’ny mponina fa nisy raim-pinakavina iray, efa tafiditra an-trano nefa nosokafan’ny mpitandro filaminana ny varavarana ary navoakan’ izy ireo avy ao an-tokantranony ka nodarohina. Naratra mafy sy tsy nahatsiaro tena io olona io. Raim-pianakaviana handeha hividy fanafody kosa ny faharoa, niharan’ny daroka koa ka naratra mafy. Tezitra ny fokonolona sy ireo nanatri-maso ka namaly tamin’ny tora-bato. Nampitandrina tamin’ny tifi-danitra kosa ny mpitandro filaminana.
Niitatra tany amin’ny fokontany maromaro izany: i Tanamborozano, Ambalakisoa, i Tanambao II, Ambolomadinika ary i « Depot ». Nirohotra amin’ny arabe nitondra vato avokoa ny olona amin’ireo fokontany ireo. Tsy nifarana ny fifamaliana tora-bato sy tifi-danitra ao an-toerana hatramin’ny fotoana nanoratana.
Olona efa nitsirara teo amin’ny sakana
Etsy andaniny, niditra an-telefaonina tao amin’ny RNM, nanazava ny toe-draharaha, ny kaomisera Rakotoarijaona Faly, any an-toerana. Notsiahiviny fa nahazo antso izy ireo tamin’ny 4 ora tolakandro fa misy savorovoro ao Ambalabe, Androranga (RN2). « Nisy nametraka sakana ny lalana, fandorana kodiarana sy tapa-biriky ary garaba. Tsy azo nandehanana ny lalana ary efa nisy olona iray maratra nitsirara eo amin’ny barazy. Nandeha avokoa ny tora-bato satria efa nisy polisy vitsivitsymiaraka amin’ny Fip teny an-toerana », hoy izy. Nanteriny fa niezaka niresaka tamin’ireo raiamandreny ao Ambalabe izy ireo rehefa tonga teo.
Fanamiana sivily sy tee shirt miaramila, nidaroka
Nitsahatra koa ny tora-bato ary nifanatona izy ireo, araka ny nambarany. « Nanala ilay maratra izahay nanatitra azy any amin’ny hopitaly. Tsy fantatra ny nahazo azy. Nambaran’ny olona fa nisy mpitandro filaminana nively tamin’ny kibay fotsy (baton). Mainty anefa ny anay polisy (baton) fa tsy fotsy », hoy ihany izy. Nambarany fa efa nahatsiaro tena any amin’ny hopitaly ilay naratra ary niezaka nandarava ny barazy izy ireo sady nanentana ireo olona tsy hitangorona intsony. Nilaza ilay naratra, efa nody any an-tokantranony, fa nisy nanao fanamiana sivily sy tee shirt mpitandro filaminana ireo nidaroka azy. Nisalasala ny amin’ny hoe mpitandro filaminana no nidaroka azy izy.
Araka izany, andrasana ny ho tohiny.